Howlgal aan caadi ahayn oo maanta ka socda magaalada B/weyne iyo dad badan oo lasoo qabtay – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Howlgal aan caadi ahayn oo maanta ka socda magaalada B/weyne iyo dad badan oo lasoo qabtay
Ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti ee AMISOM ayaa maanta howlgal aad u balaaran ka wadda xaafadaha ku yaala magaalada B/weyne ee xarunta gobolka Hiiraan, halkaas oo maalintii shalay uu ka dhacay weerar ismiidaamin ah.
Weerarkaasi oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa lagu qaaday saldhig ciidan oo ay galbeedka magaalada B/weyne kaga sugnaayeen ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti.
Mas’uuliyadda weerarkaasi waxaa islamarkiiba sheegtay Al-shabaab, waxayna sheegeen inay dileen ku dhawaad 20-askari oo ka tirsan ciidanka Jabuuti oo saldhigaasi ku sugnaa.
Sidoo kale, qoraal ay AMISOM soo dhigtay barteedda Twitter-ka ayaa iyana waxay ku sheegtay in qaraxaasi kadib ay dileen 10 dagaalyahano ka tirsan Al-shabaab oo halkaasi weerar kusoo qaaday.
Ilaa iyo haatan ma jiro ilo madax banaan oo xaqiijin kara hadalada ay is-dhaafsanayaan labada dhinac.
Ciidanka maanta howlgalada ka wada magaalada B/weyne ayaa howlgaladaasi kusoo qab-qabtay dad badan oo lala xiriirnayo weerarkii shalay ee halkasi ka dhacay, kuwaas oo haatan su’aalo badan la weydiinayo.
Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd markii weerar ismiidaamin ah lagu qaaday saldhig ciidan oo ay galbeedka magaalada B/weyne ku lahaayeen ciidanka AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti, waxaana sida la sheegay weerarkaas ka dhashay qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.